Global Voices teny Malagasy » Mongoliana Mpifindrafindra-monina Niala Fiompiana, Ary Niditra Tamin’ny Setroka · Global Voices teny Malagasy » Print
Mongoliana Mpifindrafindra-monina Niala Fiompiana, Ary Niditra Tamin'ny Setroka
Voadika ny 10 Aogositra 2017 4:27 GMT 1	 · Mpanoratra Public Radio International Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Mongolia, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
Ulaanbaatar feno setroka tamin'ny taona 2010. Sary avy amin'ilay mpisera Flickr, Einar Fredriksen. CC BY-SA 2.0
Ity tantara avy amin'i Anne Bailey  ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org  tamin'ny 10 Jolay 2017. Navoaka eto indray izany noho ny fifanaraham-piarahamiasa eo amin'ny PRI sy Global Voices.
Nisy zazakely iray mitomany raha mbola manao dite sy mandrehitra afo amin'ny fatana ao anatin'ny trano lay ny fianakavian'ny reniny. Mavesatra ny rivotra ao anatin'ny trano miaraka amin'ny setroka sy ny fofona fraomazy. Misy tovoalhy roa milalao any an-tokotany.
Zavatra mety hita amin'ny fotoana rehetra ao Mongolia zato taona lasa izany, ary na aiza na aiza ao amin'ny lemaka midadasika misokatra ao amin'ny firenena: izay nanohizan'ireo fianakaviana mpifindrafindra monina ny fiompiany nandritra ny taranaka tsy voatanisa.
Saingy niova haingana ny zava-misy ao Mongolia. Ary vao haingana ity fianakaviana mpifindrafindra monina ity no nametraka ny trano lainy tao amin'ny toerana tsy nampoizin'izy ireo hiafarana mihitsy – tànana hafa kely misy arabe feno vovoka, fefy vonjimaika sy trano lay an-jatony ao amin'ny tanàna renivohitra be olona ao Ulaanbaatar.
Taona vitsy lasa izay, niala tamin'ny fiompiana ny fianakaviana ary nifidra tao an-tanàndehibe rehefa very nandritra ny ririnina mahery vaika ny ankamaroan'ny biby fiompin'izy ireo, fantatra amin'ny anarana hoe «dzud».
Ary tsy irery izy ireo.
“Maro ireo fianakaviana mpifindrafindra monina no very omby mandritra izany fotoana izany, hoy i Jargalsaikhan Erdene-Bayar, raim-pianakaviana. “Ka nanomboka nifindra teto izy ireo. Ary mbola mitranga ihany izany.”
Anisany ampahany amin'ny fiainako ao Mongolia ny Dzuds, saingy noho ny fiovaovan'ny toetr'andro, toa mitranga matetika izany. Ary miteraka olana marobe — fahaverezan'ny fomban-drazana, fifindran-toerana, hipoka olona. Ary ny zavo-tsetroka.
Jereo ny andro ririnina ary hitanao izany
“Misy io tafolohalambo mambomba ny tanàna io, tafolohalambo miloko volombatolalaka,” hoy ny mpikatroka iray ao an-toerana, Tuguldur Chuluunbaatar.
Mandritra ny vanim-potoana ririnina, mandoro izay hitan'izy ireo fa mampafàna ny ankamaroan'ireo mponina vaovao ao an-tanàna
“Arintany ny ankamaroany,” hoy i Chuluunbaatar, “saingy misy ireo olona sasany mitady handoro zavatra hafa, toy ny kodiarana, plastika.”
Zazakely valo volana Munkh-erdene mipetraka eo akaikin'ny fatana nentim-paharazan'ny fianakaviany ao anatin'ny trano lay, na yurt ao Ulaanbaatar. Natao handoroana hazo na zezika biby ny fatana, saingy maro ireo fianakaviana mampiasa azy ireo handoroana arintany, miteraka fitomboan'ny loton'ny rivotra mandritra ny ririnina. Loharano: Anne Bailey
Solika tena maloto ireo, vao maika niharatsy noho ny fatana nentim-paharazana tsy mahomby natao handoroana hazo sy zezika biby. Ary ny setroka avy amin'izany fandoroana izany, miaraka amin'ny setroky ny fiara, ny orinasan'ny herinaratra sy ny indostria no miangona amin'ny rivotra mangatsiaka kokoa eo ambonin'ny tendrombohitra manodidina. Samy mandray anjara amin'ny kalitaon'ny rivotra ao amin'ity tanàna ahitana mponina 1,4 tapitrisa ity izy ireo izay mety ho ratsy kokoa noho ny ao an-tanàndehibe malaza ratsy fa maloto tahaka an'i Beijing sy Mumbai.
Ny fianakavian'i Erdene-Bayar irery dia mandoro arintany telo taonina isaky ny ririnina.
Fantany fa tsy mahasalama ny fanafanàna ny tranon'ny fianakaviany amin'izany fomba izany. Saingy tsy mahita fomba hafa izy.
“Ny fandoroana arintany no hany safidy,” hoy i Erdene-Bayar. “Tsy misy etona voajanahary ao Mongolia, ary lafo ny herinaratra.”
Nandany an-tapitrisa dolara tao anatin'ny taona vitsivitsy ny governemanta teto mba hiadiana amin'ny fahalotoan'ny rivotra. Ary manana drafitra handany vola bebe kokoa amin'ny fananganana trano avo miaraka amin'ny fanafanàna afovoan-trano mahomby kokoa ho an'ny fianakaviana monina amin'ny trano lay amin'izao fotoana ny governemanta. Saingy mihisatra ny fampandrosoana, ary maro ny mpifindra monina tsy te-hiala amin'ny trano nentim-paharazana hifindra amin'ny rindrina simenitra. Maro no mbola manantena hiverina amin'ny fomban'izy ireo taloha. Saingy mety fanantenana tsy azo tanterahina izany.
“Olana lehibe ny main-tany”, hoy i Batjargal Zamba, mpamantatra toetrandro sy mpanolotsaina ao amin'ny Minisiteran'ny Tontolo Iainana ao Mongolia . “Ary noho ny fiakaran'ny maripànan'ny tany, hihitatra ny faritra karankaina ao Mongolia.”
Midika izany hoe mihena ny ahitra ho an'ny biby fiompy. Izay mety midika fa ho vitsy kokoa ireo fianakaviana mpifindrafindra monina, fifindra-monina bebe kokoa mankany Ulaanbaatar ary fanamby maro ho an'ny tanàna.
Mahafantatra ireo mpikatroka ao an-toerana tahaka an'i Chuluunbaatar fa tsy misy zavatra betsaka azon'izy ireo atao mba hamahana ireo olana lehibe ireo, saingy manosika hatrany ho amin'ny fiovana izy ireo. Anisany ao anatin'ny tetikasam-piarahamonina  mandrakitra an-tsarintany ny fepetra ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy ao amin'ny distrikan'ny trano lay ao an-tanàna i Chuluunbaatar – mandrakitra ny zava-drehetra avy amin'ny halavirana tsy dia lavitra, tahaka ny famatsiana rano, ny toerana fanariam-pako tsy ara-dalàna ary ny fahalotoan'ny rivotra. Ny tanjona dia ny fampiasana tahiry hanampiana ny hetsika fanohanana ny asa.
“Tena sarotra ny mampanao zavatra ny governemanta rehefa irery ianao,” hoy i Chuluunbaatar. “Saingy amin'ny alalan'ny fiarahamonina, tena mahery ny feo.”
Ary niova tsikelikely ny zava-drehetra. Nametraka fanalefahana ny hetra ho an'ireo orinasa madinika ny governemanta mba hamokatra fatana tsara kokoa, ary niteraka fahazotoana mba handrisika ny mponina hanafàna amin'ny herinaratra somary madio kokoa izany.
Saingy dingana miadana izany, ary nilaza i Erdene-Bayar, mpiandry ondry teo aloha fa tsy nahita fihatsarana mihitsy izy
“Olana lehibe ny fahalotoan'ny rivotra”, hoy izy. “Tena mampidi-doza ho antsika monina eto izany.”
Manohitra ny zavatra hafahafa rehetra, mbola manonofy hody an-tanindrazana, misy rivotra madio i Erdene-Bayar sy ny fianakaviany .
“Te hanohy ny fomba fiainako mpifindrafindra-monina aho”, hoy izy. “Tiako ny fiompiana”.
Jargalsaikhan Erdene-Bayar mihazona ny zanany lahy valo volana Munkh-erdene ao anatin'ny trano lay ny fianakaviany ao Ulaanbaatar. Niompy omby tao ambanivohitra i Erdene-Bayar hatramin'ny ririnina namono ny ankamaroan'ireo biby fiompiny ary nanery azy hitady asa ao an-tanàna. Credit: Anne Bailey
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/08/10/104131/
 Anne Bailey: https://www.pri.org/people/anne-bailey
 Minisiteran'ny Tontolo Iainana ao Mongolia: http://www.mne.mn/